qorshaha tijaabada agile - runti ma waxaan u baahanahay mid?
Ugu Weyn Ee Kacsan Qorshaha Agile Test - Runtii ma waxaan u baahanahay mid?
Qorshaha Agile Test - Runtii ma waxaan u baahanahay mid?
Ma waxaan u baahanahay Dukumenti Qorshe Agile ah?
Qorshaynta Imtixaanku waa hawl muhiim ah oo ka mid ah nidaamka tijaabada waana mid u baahan fikrado iyo go'aanno taxaddar leh oo aan ka ahayn maareeyaha imtixaanka oo keliya (oo inta badan mas'uul ka ah sameynta qorshaha imtixaanka) laakiin dhammaan xubnaha kooxda imtixaanka iyo maareeyaha horumarinta wax soo saarka.
Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin inay tahay qaybta ugu muhiimsan ee nidaamka imtixaanka (shakhsiyan waxaan u maleynayaa naqshadaynta imtixaanka iyo fikirka aan la taaban karin ayaa ugu muhiimsan) waxayna ku qaataan saacado badan iyo dadaal la imaanshaha qorshe imtixaan oo weyn.
Buugaagta qoraalka ayaa u hibeeya qayb dhan oo la xidhiidha qorshaynta imtixaanka, sida loo qoro mid iyo waxa lagu daro qorshaha imtixaanka halka qaar ka mid ah hay'adaha maamulka iyo ururada sharciyeynta sida FDA ay u baahan yihiin qorshe tijaabo oo dhammaystiran si loo oggolaado wax soo saar.
Adduunyada dhabta ah, jawiga biyo-dhaca, inta badan dukumiintiga qorshaha tijaabada waa mid aan waligiis la eegin inta lagu jiro wareegga nolosha ee badeecada. Waxqabadka “Qorshaynta Imtixaanka iyo Korjoogteynta” waa inay noqotaa hawl socota inta lagu gudajiro wareegga mashruuca, waa in loo cusboonaysiiyaa hadba isbeddelada ku yimaada mashruuca, laakiin inta badan kiisku sidaas ma aha; qorshaha imtixaanka midkoodna lama cusbooneysiin ama isbeddelada ayaa dib loo eegay, taasoo ka dhigaysa dukumintiga qorshaha imtixaanka kan ugu yar ee wax soo saar qiimo leh
Inkasta oo qorshaynta tijaabada ah had iyo jeer loo tixgeliyo inay tahay alaab qasab ku ah mashruuca biyo-dhaca, ma waxaan dhab ahaantii u baahanahay qorshe tijaabo ah oo loogu talagalay mashruuc deg deg ah? yacni miyey runtii wax qiimo ah ku kordhinaysaa waxa kooxda oo dhami isku dayeyso inay gaarto?
Manifesto-dhaqaaqa ayaa si cad u jecel software shaqeeya dokumentiyo dhameystiran iyo ka jawaab celinta isbedelka ka dib markii la raaco qorshe.
Jawiga dag dagga ah, waxyaabaha ku jira sii deynta (walxaha) ayaa laga wada hadlayaa ka hor inta aan la furin si kooxda tijaabinta ay horay u sii ogaadaan waxa ay tahay iyo waxa la tijaabinayo.
“Ciyaarta turubka qorshaynta” qiyaasaha ayaa looga hadlayaa iyada oo loo marayo markaa kooxda imtixaanku waxay ogaanayaan inta ay qaadanayso in lagu tijaabiyo muuqaalka (tani waxay ka kooban tahay dejinta deegaanka, xaaladaha, otomatiga, sahaminta, waxqabadka, iwm).
In 'fadhiga qorista sheekada' halkaasoo faahfaahinta qaab kasta looga fekerayo, kooxda imtixaanka ayaa durbadiiba bilaabay inay qoraan xaalado si ay u daboolaan siyaabaha badan ee sheekooyinka loo tijaabin karo - tani waa waxqabadka ugu qiimaha badan kooxda.
Inta lagu gudajiray orodka, QA waxay si isdaba joog ah u tijaabinayaan koodh / muuqaal cusub. Qorshaynta tijaabadu waxay noqotaa dhaqdhaqaaq firfircoon iyada oo ahmiyadaha ugu weyn ee maalinta la beddelayo. Tijaabadu waxay ku saleysan tahay maxay tahay hawsha maalinta iyo natiijada maalinta ka horreysa.
Way cadahay in qorshaha imtixaanku aanu muujinayn cilladaha laakiin dhacdooyinka tijaabada ayaa muujin doona. Dadaalku wuxuu u baahan yahay in loo wareejiyo abuurista xaalado ka wanaagsan sidii loo abuuri lahaa qorshe tijaabo ah.
Waxa dhab ahaan loo baahan yahay ayaa kooban dukumiintiga istiraatiijiga ah ee tijaabada ah ee tilmaamaya habraacyada lagu dabaqi karo orodka , yacni qaybaha ku saabsan Qorshaynta Gudbinta, Aqoon isweydaarsiyada qeexan, Buugga QA, otomatiga, Daboolida Imtixaanka, Warbixinta Imtixaanka, Deegaanada Imtixaanka, Diyaarinta, iwm.
Marka, iyada oo tan oo dhan maskaxda lagu hayo, dukumiintiga Qorshaha Imtixaanka ama Xeeladaha Tijaabada ballaaran ayaa runtii wax la soo dhaafay ah? Runtii ma u baahanahay Qorshaha Agile Test?
taleefan leh nolol batteri wanaagsan 2017
muraayad Android si pc USB
aio 1.7.32 koodh koodh
Sida loogu daro dhalasho Google Calendar
IPhone 12 waa taleefanka ugu fiican ee 5G ee lagu iibsado qorshooyinka shabakada Verizon iyo AT & T hadda
Dib-u-eegista Google Nexus 5 su'aalaha iyo jawaabaha: waxaan uga jawaabnaa su'aalahaaga
Joker Trojan, oo ah virus halis ah oo Android ah, ayaa ku dhaca Huawei
Dib u eegista kiisaska rasmiga ah ee Galaxy S10, S10 Plus & S10e: maqaar, silikoon, roogag, LED, folio
Warbixin: Microsoft Lumia 950 waxay bilaabaysaa AT&T Noofambar 20keeda
Hel ilaa $ 700 oo ka baxsan iPhones-ka u-qalma marka aad u wareejiso AT&T (waa loo baahan yahay ganacsi)
Telefoonada Verizon ee ugu wanaagsan ee laga iibsado 2021
AT&T waxay isticmaashaa Carrier IQ iyo aalad u gaar ah oo la yiraahdo Mark the Spot
Sida loo xiro (oo looga hortago helitaanka) barnaamijyada shaqsiyeed ee ku jira Android